၈ Potenzial Soy Lecithin အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများ - Shangke Chemical
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ဖြည့်စွက်မှု၏ကျော်ကြားမှုသည်တောမီးလောင်သကဲ့သို့ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ လက်ဆီသင်သည်အများအားဖြင့်အပင်များတွင်သာမကသတ္တဝါတစ်ရှူးများ၌ပါသောဖက်တီးဒြပ်ပေါင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ လက်ဆီသင်သည်အစားအစာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့်အပြင်ချက်ပြုတ်သည့်အဆီနှင့်သုပ်တစ်သင်းလုံးကဲ့သို့ကဲ့သို့သောအစားအစာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းလူသိများသည်။
လက်ဆီသင်ကို lecithin ဥကို York မြို့မှထုတ်ယူခဲ့သော်လည်းအချိန်တန်သော်ဝါဂွမ်း၊ ပင်လယ်စာ၊ ပဲပုပ်၊ ကျောက်ကပ်၊ ပဲအနက်ရောင်၊ နို့၊ ဤရွေ့ကားများထဲမှပဲပုပ်ပဲများသည်အပေါများဆုံးလက်ဆီသင်အရင်းအမြစ်များထဲမှဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲပုပ်လက်ဆီသင်သို့ပို့ဆောင်သည်။
soy lecithin သည် hexane ကဲ့သို့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအရည်ပျော်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ ပဲပုပ်မှထုတ်ယူသောလက်ဆီသင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လက်ဆီသင်ကိုအခြားဘေးထွက်ပစ္စည်းများမှထုတ်ယူရန်ဆီထုတ်ယူပြီးနောက်၎င်းသည်လက်ဆီသင်ခြောက်သွေ့သွားသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်အတွေ့ရများဆုံးအစားအစာဖြစ်သည်။
လက်ဆီသင်အမှုန့် စားသုံးသူများ၏ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သမားရိုးကျနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင်အစားအစာထုတ်ကုန်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ပဲပုပ်လက်ဆီသင်အမှုန့်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ကိုလက်စထရောလျှော့ချခြင်းအပါအ ၀ င်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့၏မြင့်မားသော phosphatidylcholine နှင့် phosphatidylserine ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤ phospholipids နှစ်မျိုးသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ lipid အစားထိုးကုထုံးကိုအခြားလုပ်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးဝင်သည်။
HDL ပမာဏတိုးများလာသောအခါလက်စထရော (low-density lipoprotein) ပမာဏလျော့နည်းစေသည်။ လူတစ် ဦး သည်ကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများရှိသော်လည်းလက်ဆီသင်ဆေးတောင့်များ၊ ပဲပိစပ်လီစီတင်းနို့သို့မဟုတ်ပဲပုပ်အမှုန့်များပါဝင်သောအစားအစာများသည်သဘာဝကုထုံးများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ဓာတ်ဖြည့်စွက်စားသုံးမှု (တစ်နေ့လျှင် ၁၇ မီလီဂရမ်ခန့်ခန့်) သည် cholesterolemia တွင် ၄၁ စုစုပေါင်းကိုလက်စထရောလျှော့ချခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသုတေသီများကပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်လအကြာမှာ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် LDL ကိုလက်စထရောပမာဏသည် ၄၂% နှင့် ၂ လအကြာတွင် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ ဤအချက်သည်ပုံမှန်ပဲပုပ် lecithin ဖြည့်စွက်စားသုံးမှုသည် hypercholesterolemia အတွက်ထိရောက်သောကုစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်နှင့်ရင်သားကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းအလားအလာကိုအဓိကထားသော ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာဂျာနယ်၏လေ့လာချက်အရလက်ဆီသင်ကိုဖြည့်စွက်သုံးစွဲခြင်းသည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။ သုတေသီများကစမ်းသပ်ကာလအတွင်းပဲပိစပ်လက်ဆီသင်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးသည့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့ကျစေသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်တွင် phosphatidylcholine ပါသောကြောင့်ဤကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်။ အစာခြေသောအခါ phosphatidylcholine သည် choline သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးသည်။
သို့သော်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်သည်ရင်သားကင်ဆာအတွက်ထိရောက်သောသဘာဝကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုတ်မဟုတ်သေချာစေရန် ပိုမို၍ ပဲပုပ်လက်ဆီသင်နှင့်ရင်သားကင်ဆာသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။
3.Ulcerative colitis ကယ်ဆယ်ရေး
ပိုကောင်းသည်မှာသုတေသနပြုချက်များအရပဲပုပ်လက်ဆီသင်အမှုန့်များအတွင်းရှိ phosphatidylcholine ပါဝင်မှုသည်အနာကိုအူရောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤသည်ရောဂါကြောင့်ပျက်စီးသွားသောချွဲအတားအဆီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသည်။
Soy lecithin တွင် phosphatidylserine ပါ ၀ င်ပြီးအရေးကြီးသော phospholipid သည်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကိုလွှမ်းမိုးသည်။ အထူးသဖြင့်သုတေသီများက phosphatidylserine ရှုပ်ထွေးသောသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အားစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ချရန် phosphatidic acid (soy lecithin တွင်ပါ ၀ င်သော) phosphatidic acid နှင့်အလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရပဲပုပ်လက်ဆီသင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများအတွက်သဘာဝကုသမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ထို့အပြင်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး American Journal of Clinical Nutrition တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုတစ်ခု၏တွေ့ရှိချက်များအရမြင့်မားသောလူတို့သည် (ပုံမှန်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်သုံးစွဲသူများအပါအ ၀ င်) ကိုလက်စ်ပမာဏသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းသောက်ပါကပဲပိစပ်လက်ဆီသင်ဆေးတောင့်သည်သင်၏အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ၎င်းသည်ဓါတ်တိုးခြင်းဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ekzema နှင့်ဝက်ခြံများအတွက်ထိရောက်သောသဘာဝဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကပဲပိစပ်အရေပြားထုတ်ကုန်များတွင်ပဲပုပ်လက်ဆီနင်သည်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်၏သက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများက၎င်းသည်ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နေ့စဉ်ပဲ လက်ဆီသင်ဖြည့်စွက် သွေးကြောထဲရှိရောဂါပိုးများကိုတိုက်ထုတ်ရာတွင်သွေးဖြူဥများကိုကူညီပါ။
ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့်ပဲပိစပ်လက်ဆီသင်သည်လူ့ ဦး နှောက်နှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးတွင်အဓိကအားဖြင့်ကိုလင်းသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနေဖြင့်စိတ်ရောဂါခံစားနေရသောလူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏နေ့စဉ်အစားအစာအစီအစဉ်တွင်ပေါင်းစပ်ပါကပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုများစွာအကျိုးပြုနိုင်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အသက် ၄၀ မှ ၆၀ ကြားရှိအမျိုးသမီး ၉၆ ဦး ကိုသုတေသနပြုချက်အနေဖြင့်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ဖြည့်စွက်ဆေးများကသွေးဆုံးအမျိုးသမီးများအတွင်း၌ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နမူနာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အချို့မှာပဲပိစပ်လက်ဆီသင်ဖြည့်စွက်မှုစနစ်နှင့်ကျန်တဲ့အရာတွေကိုတော့ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ကနေတင်ထားတာဖြစ်တယ်။
အခြား phospholipids များကဲ့သို့, လက်ဆီသင်မော်လီကျူးများသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်သည်။ ရေကိုရေနံနှင့်ရောနှောလျှင်မော်လီကျူးသည်အရောအနှောတွင်ပျော်ဝင်သွားလိမ့်မည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းတို့ကိုရေနှင့်ဆီပါ ၀ င်သောအရောအနှောများတွင်တွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်ရေမော်လီကျူးများသည်ရေနံမော်လီကျူးနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဒေသများရှိသူတို့၏ဖက်တီးအက်စစ်သည်ရေနံနှင့်ဖော့စဖိတ်အုပ်စုများနှင့်ထိတွေ့ပြီးရေထဲသို့ရောက်ရှိသွားသည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှု lecithin emulsify သည်ရေနံဆီများမှကာကွယ်သောဒိုင်းလွှားငယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ရေကိုဆွဲဆောင်သောဖော့စဖိတ်အဖွဲ့များသည်သာမန်အခြေအနေတွင်ဘယ်သောအခါမျှရေထဲ၌ဘယ်တော့မျှမရှိသောရေစက်ငယ်များကိုရေရှည်ကာလအတွင်းဆက်နေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်က mayonnaise နှင့်သုပ်တစ်သင်းလုံးကဘာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောရေနံနှင့်ရေအစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြားမထားသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသည်။
ပဲပိစပ်လက်ဆီသင်ကိုစားသုံးခြင်းကအပျော့စားပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များသည့်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
အကယ်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပဲပုပ်အပေါ်အလွန်အမင်းဓာတ်ပြုခြင်းရှိလျှင်သင်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုစားပြီးနောက်ပဲပုပ်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပဲလက်ဆီသင်နို့ကိုမသောက်သုံးမီမှာပဲပုပ်ဓာတ်မတည့်မှုကြုံခဲ့ရရင်သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ပဲပုပ်လက်ဆီသင်.
ဒါကြောင့်ပဲပုပ်ဓာတ်မတည့်မှုကပဲပိစပ် lecithin ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ရှားပါးသောအချိန်များတွင်သာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပဲပိစပ်လက်ဆီတီနင်နှင့်အီစရိုဂျင်အဆင့်အကြားဆက်နွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာစိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ လူအချို့ကပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုစားသုံးခြင်းသည်သိုင်းရွိုက်နှင့် endocrine hormones ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှောင့်ယှက်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ထိုအနှောင့်အယှက်ရာသီပြincludingနာများအပါအဝင်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သို့သော်စစ်မှန်သောအနေအထားတွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်“ အပင်အက်စထရိုဂျင်” ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ဟူသောသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားမရှိပါ။ လက်ဆီသင်အက်စစ်သည်လူတစ် ဦး ၏အီစထရိုဂျင်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိရစ္ဆာန်အရင်းအမြစ်မှသာလျှင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ Thorne Research မှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုကဤအနေအထားကိုထောက်ခံသည်။ သုတေသန၏တွေ့ရှိချက်များအရပဲပုပ်နှင့်ပဲပုပ်ထွက်ကုန်များသည်လူတို့တွင် estrogenic ပြissuesနာများဖြစ်စေသည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
soy lecithin ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အမှန် ပဲပုပ်လက်ဆီသင်သောက်သုံးသော လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး မှဆွေမျိုးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်စားသုံးသူ၏အသက်အရွယ်စသည်တို့အပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်သည်။
မှတ်သားရန်မှာတိကျသောအခြေအနေတစ်ခုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောလက်ဆီသင်ဆေးပမာဏအတိအကျကိုပြနိုင်သောသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားမရှိပါ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်ဆေးပမာဏသည် ၅၀၀ မီလီဂရမ်မှ ၂,၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိရှိသည်။ သို့သော်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးပမာဏကိုအတည်ပြုရန်သင့်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်။
ပဲပိစပ် lecithin အမှုန့်ကိုအသုံးပြုသည်
emulsification: အစားအသောက်နှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကို emulsifier (သို့) အေးခဲစေသောပစ္စည်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပဲပုပ်လက်မှုန့်အမှုန့်ကိုအသုံးပြုရန် ၀ ယ်သည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းနှင့်အစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်း: ချောကလက်၊ ဟင်းရည်၊ အခွံမာသီး၊ မုန့်ဖုတ်ထားသောအစားအစာများနှင့်သုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများ (သို့) အလှကုန်ထုတ်ကုန်များ (မိတ်ကပ်များ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်များ၊ အရေပြားအေးစက်စေခြင်း၊ ။
အချို့လူများကလက်ဆီသင်ကိုအိမ်တွင်းအလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အစားအစာထုတ်ကုန်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်လက်ဆီသင်ကို ၀ ယ်သည်။
ကိုလင်းဓာတ်ဖြည့်စွက်ဖြေ - လူအတော်များများကပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုပဲပုပ် ၀ ယ်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဲပုပ်လက်ဆီသင်အမှုန့်ဟာဓာတ်ကူပစ္စည်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်တာကိုသိလို့ပဲ။ သင်သည်သင်၏ဖျော်ရည်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဒိန်ချဉ်၊ စီရီရယ်၊ ဂျုံမှုန့်သို့မဟုတ်အခြားသင်နှစ်သက်သောအစားအစာသို့မဟုတ်အဖျော်ယမကာတစ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းသို့မဟုတ်နှစ်ဇွန်းကိုဖြန်းနိုင်သည်။
ဤဖြည့်စွက်ချက်သည်သင့်အားကျန်းမာရေးအကျိုးခံစားခွင့်များစွာပေးသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများတွင်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေနိမ့်ကျခြင်း၊ အစာခြေခြင်းပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းမရှိသောနို့တိုက်ခြင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊
လက်ဆီသင်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသဘာဝအဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသောဆေးနှင့် emulsifier အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ လက်ဆီသင်၌ပါ ၀ င်သည့် choline ပါဝင်မှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိစုဆောင်းထားသောအဆီများကိုပျော်ဝင်စေပြီးအသည်း၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အဆီနှင့်ကယ်လိုရီပိုမိုများပြားစွာကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သောကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။
ထို့အပြင်သုတေသနပြုချက်အရလက်ဆီသင်ကိုသောက်သုံးသူများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုမခံစားရသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ထို့ကြောင့်လက်ဆီသင်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုများစေခြင်းဖြင့်ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ကာအချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်နိုင်သည်။
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။ သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေလျှင်၊ သင်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုရောင်းလိုပါကပဲပုပ်လက်ဆီသင်အမြောက်အများဝယ်ယူနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ဝယ်ယူသောပဲပုပ်လက်ဆီသင်အမြောက်အများသည်အမှန်ပင်စစ်မှန်ကြောင်းသေချာစေရန်ရောင်းသူ၏သမာဓိကိုတည်ဆောက်ရန်သင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်။ သင်ကလိမ်လည်သူသို့မဟုတ်အတုရောင်းသူများ၏လက်ထဲသို့မကျလိုပါကရောင်းချရန်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ရှိသည်ဟုဆိုသူမည်သူမဆိုအားမယုံကြည်ပါနှင့်။ အသိအမှတ်ပြုပြီးလိုင်စင်ရရောင်းချသူကိုသွားပါ။
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်များစွာသောအရာနှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထက်သာလွန်သည်။ သို့သော်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်သုံးစွဲသူများသည်အကောင်းဆုံးကိုရရှိရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ဆေးသောက်ရန်အကြံပြုသည်ကိုလိုက်နာသင့်သည်။ ဒါ့အပြင်ပဲပိစပ်လက်ဆီသင်ကိုကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း ၀ ယ်လိုသည်ဆိုပါက၎င်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်တစ်ခုမှရရှိရန်သေချာစေသင့်သည်။
Chung, C တို့, Sher, အေ, Rousset, P. , နှစ်ထပ်, EA, & McClements, DJ သမား (2017) ။ သဘာဝ emulsifiers ကို အသုံးပြု၍ အစားအစာ Emulsions ကိုပုံဖော်ခြင်း - အရည်ကော်ဖီ whiteners ပြုလုပ်ရန် quillaja saponin နှင့် soy lecithin ကိုအသုံးပြုခြင်း။ အစားအစာအင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်, 209, 1-11 ။
Hirose, အေ, Terauchi, အမ်, Osaka, Y. , Akiyoshi, အမ်, Kato, K. , & Miyasaka, N. (2018) ။ ပဲပုပ်လက်ဆီသင်ကိုအလယ်အလတ်အမျိုးသမီးများအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများအပေါ်သက်ရောက်မှု - ကျပန်း၊ မျက်စိကန်းသော၊ အာဟာရဂျာနယ်, 17(1),4။
Oke, အမ်, ယာကုပ်, JK, & Paliyath, G. အ (2010) ။ သစ်သီးဖျော်ရည် / ငံပြာရည်အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စားနပ်ရိက္ခာသုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, 43(1), 232-240 ။
Yokota, D. , Moraes, M. , & Pinho, SCD (၂၀၁၂) ။ Non- သန့်စင်ပဲပုပ်လက်ဆီသင်နှင့်အတူထုတ်လုပ် lyophilized liposomes ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ: casein hydrolyzate microencapsulation ၏ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု။ ဘရာဇီးဓာတုအင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်, 29(2), 325-335 ။
Züge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (2013) ။ ပဲပုပ်လက်ဆီသင်နှင့် Tween 80 အခြေခံအစားအစာ emulsions များတွင်အပြောင်းအလဲနှင့်အပြောင်းအလဲ။ အစားအစာအင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်, 116(1), 72-77 ။